Vaovao - Maninona ny vokatra any amin'ny birao simenitra amin'ny fibre no betsaka kokoa amin'ny fampiasana marobe eo amin'ny sehatry ny fananganana tontolo?
Vondrona Amulite China
Birao simenitra simenitra / tsipika famokarana silikôla silikôla
EPS Sandwich Cement Wall Panels Production Line
Non-Asbestos / Asbestos simenitra vita amin'ny roof vita amin'ny tampon-taratasy
Hollow Core Cement Wall Panels-pamokarana
UV Coating / Drafitra famokarana sary hosodoko
Tsipika famokarana vovoka gypsum
Tsipika famokarana MGO Board
Milina fanaovana biriky
AAC dia manakana ny rafitra fanosotra mandeha ho azy
Atrikasa fonosana milina mandeha ho azy
Masinina manome profil
Embossed Metal Composite Exterior Panels Production Line
Rafitra fanoratana mandeha ho azy tanteraka
Masinina Punch Perforated
Perlite fanaovana famokarana Perlite
Masinina Pr panel Concrete Panels
Lamin'ny famokarana laminated PVC
Masinina voadio tarehy tokana
Masinina Crusher Hammer vato
Maninona ny vokatra avy amin'ny fonosan'ny simenitra no betsaka kokoa amin'ny fampiasana ny indostrian'ny fananganana izao tontolo izao?
Birao simenitra vita amin'ny fibre izao no ampiasaina betsaka amin'ny fizarazaran-drindrina anatiny, rindrina ivelany sy tafo, rindrina vita amin'ny rindrina / tampon'ny sandwich, fantson-drivotra, rindrin'ny hopitaly ary fizara an-tampon'ny trano sy birao fanaovana firafitra vy, Ilaina amin'ny birao simenitra vita amin'ny fibre ho an'ny tranobe vitaina;
1): Raha ampitahaina amin'ny Birao Gypsum, ny Birao Simenitra Fibre dia manana fampisehoana tsaratsara kokoa noho ny Birao Gypsum ho an'ny endri-javatra tsy misy afo, tantera-drano, bakteria, akora mora azo, mora apetraka, napetraka be amin'ny toerana rehetra, tsy misy fetran'ny fametrahana;
2): Ampiasaina ho toy ny birao mihantona ety ivelany ny fampisehoana azy amin'ny fitaovana vato marbra hafa, saingy satria lafo be loatra ny vidin'ny fitaovana marbra, ka amin'ny tetikasa maro dia maro ny olona no misafidy UV Board misy simenitra vita amin'ny fibre vita amin'ny embona.
3): Ampiasao ho toy ny birao fandefasana hafanana eny an-kalamanjana, miaraka amin'ny tanjona hamonjy angovo, ankehitriny maro ny tranobe manana endrika ho an'ny hafanana eny an-kalamanjana, hametrahana birao simenitra vita amin'ny fibre ary ny EPS hanaovana insulasi hafanana no malaza kokoa, na maka Sandwich EPS Panelan'ny rindrina simenitra ho toy ny birao fitambarana napetraka mivantana;
4): Miakatra ny vidin'ny trano, mihamaro izao ny trano miorina amin'ny fantsom-pokontany simenitra ho toy ny birao fanoloana ny taila vita amin'ny keramika, MDF na gorodona hazo na gorodona mifanelanelana PVC ao an-trano, satria ny birao simenitra vita amin'ny simenitra dia manana tombony bebe kokoa amin'ny rano, Anti -humidity, tsy mandeha amin'ny afo, fanamafisam-peo akorika, Antiseptika noho ny birao hafa;
5): Ny birao simenitra vita amin'ny fibre dia azo ampiasaina ho fitaovam-pamokarana ho an'ny famokarana rindrina vita amin'ny rindrin'ny sandwich, ny rindrina vita amin'ny sandwich, ny rindrina vita amin'ny sandwich, ny vokatra vita amin'ny tranobe vita amin'ny fonosana, miaraka amin'ny tontonana vita amin'ny sandwich sandwich, azontsika atao ny manatsara ny fahombiazan'ny fametrahana sy ny fangatahana ambany. Afaka mahatsapa fa manangana trano iray amin'ny fotoana fohy!
Fotoana fandefasana: Mar-11-2021
Na dia misy fiantraikany amin'ny Covid-19 A ...
Amin'ny taona 2020, ho an'ny orinasa maro, indrindra ny famokarana milina famokarana milina lehibe, noho ny Covid-19 sy ny akaiky ny sidina iraisampirenena dia nahatonga fanamby lehibe ho antsika; Noho ny Internat ...
Maninona ny vokatra vita amin'ny plastika vita amin'ny simenitra no betsaka ...
Birao simenitra vita amin'ny fibre izao no ampiasaina betsaka amin'ny rindrina anatiny, rindrina ivelany sy tafo, rindrina vita amin'ny rindrina / tafo sandwich, fantson-drivotra, rindrin'ny hopitaly ary fizarazaran-trano sy gorodona vita amin'ny vy ...
Light Weight EPS Sandwich Simenitra Wall / Ro ...
Maivana EPS Cement Sandwich Wall Panel Machine dia novolavolaina araka ny firoboroboan'ny tsena amin'ny fananganana fitaovana vaovao, ny orinasanay dia mamolavola ny fomba fanavaozana vaovao an'ny Hig ...
Asbestos simenitra mitafo fanitso takelaka / Ce ...
Takelaka vita amin'ny tafo vita amin'ny simenitra simenitra, antsoina koa hoe takelaka vita amin'ny savony simenitra izay lanja maivana sy vokatra vita amin'ny tafo tsy tantera-drano, ary be mpampiasa any amin'ny firenena maro, ny akora fototra no ...
360 ° Mitsidika ny Orinasa misy anay